ဆံပင်ထူ ချင်တဲ့သူတွေ၊ မဲနက်ချင်သူတွေ ၊သန်ချင်သူတွေ ၊ ဆံပင်အကျွတ်သက်သာချင်တဲ့သူတွေအတွက် - Amawpyay
ဆံပင် အတွက် ချက်အုန်းဆီ၂ဝသား ၊ထောလပက်ရွက်ရယ် ၊အပုတ်ခံထားတဲလက်ဖက်ရယ်
ဆံပင်ထူချင်တဲ့ သူတွေ၊ မဲနက်ချင်သူတွေ ၊သန်ချင်သူတွေ ၊ ဆံပင် အကျွတ်သက်သာချင်တဲ့သူတွေအတွက် အိမ်တွင်း ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်လို့ ရပါတယ်ရှင်.
ချက်အုန်းဆီလေးမွှေးလာရင် အပုတ်ခံထားတဲ့ လက်ဖက်လေးတွေ ထည့်ပါ ။
လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေရဲတတ်ပြီး တူးသွားတတ်တဲ့အတွက် မီးအရှိန်လေးလျော့ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်တော့ ချက်ရ ပါတယ်..
အုန်းဆီနံ့ကော လက်ဖက်နံ့ ကလေးကော မွှေးလာပြီ ဆိုမှ ထောလပက်ရွက်လေးတွေ ကိုထည့်ပေးပါ။
ထောလပက်ရွက်လေးတွေပါ နွမ်းသွားပြီ ဆိုရင် ချလို့ ရပါပြီ.အအေးခံပြီး ကိုယ်ခေါင်းလျော်မယ့်ရက်တွေမာ မလျော်ခင်၂နာရီလောက်ကြိုပြီး ဆံပင်အနှံ လိမ်းပြီးနှိပ် ထားပါ။
ပီးရင်ခေါင်းလျော်နေကျပုံစံမျိုးနဲ့ လျော်လို့ရပါပြီ ရှင့်…
ဆန်ဆေးရည် ထပ်နှပ်ရင်တော့ ပိုကောင်း ပါတယ်ရှင် ။ ကိုယ်ကတော့ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ပါ နောက်တကြိမ်ထပ် နှပ်ပါ တယ်ရှင်
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ တစ်ခွက်ကို ခေါင်းလျော်ကြိမ်ရေ ၄ခေါက်စာ ပါ..တလကို ၃ခေါက်လောက်ချက် ရတယ်
ဆံပင်သား အလှအပကို အထူး ဂရုစိုက် ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ကိုယ်လုပ်ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းကို ဝေမျှပေး တာပါ
ဆံပငျထူ ခငျြတဲ့သူတှေ၊ မဲနကျခငျြသူတှေ ၊သနျခငျြသူတှေ ၊ ဆံပငျ အကြှတျသကျသာ ခငျြတဲ့ သူတှေ အတှကျ
ဆံပငျ အတှကျ ခကျြအုနျးဆီ၂ဝသား ၊ထောလပကျ ရှကျရယျ ၊အပု တျခံထားတဲ လကျဖကျရယျ
ဆံပငျထူခငျြတဲ့ သူတှေ၊ မဲနကျခငျြသူတှေ ၊သနျခငျြ သူတှေ ၊ ဆံပငျ အကြှတျသကျသာခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အိမျတှငျး ပစ်စညျးလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ဆံပငျကို ဂ ရု စိုကျ လို့ ရ ပါ တယျ ရှငျ.
ခကျြအုနျးဆီ လေးမှေ လာရငျ အ ပုတျ ခံ ထားတဲ့ လကျဖကျ လေး တှေ ထညျ့ ပါ ။
လကျဖကျညှနျ့ လေးတှေ ရဲတတျပွီး တူးသှား တတျ တဲ့ အတှကျ မီးအရှိနျ လေးလြော့ပွီး စိတျရှညျရှညျ တော့ ခကျြ ရ ပါ တယျ..
အုနျးဆီနံ့ကော လကျဖကျနံ့ ကလေးကော မှေးလာပွီ ဆိုမှ ထောလပကျရှကျလေးတှေ ကိုထညျ့ ပေး ပါ ။
ထောလပကျ ရှကျ လေး တှေ ပါ နှမျး သှား ပွီ ဆို ရငျ ခလြို့ ရပါပွီ.အအေးခံပွီး ကိုယျ ခေါငျးလြျောမယျ့ ရကျ တှေ မာ မလြျောခငျ၂နာရီလောကျ ကွိုပွီး ဆံပငျအနှံ လိမျး ပွီးနှိပျ ထား ပါ။
ပီး ရငျ ခေါငျး လြျောနကြေ ပုံစံမြိုးနဲ့ လြျောလို့ ရ ပါပွီ ရှငျ့…
ဆနျဆေးရညျ ထပျနှပျ ရငျတော့ ပို ကောငျး ပါ တယျ ရှငျ ။ ကိုယျ ကတော့ ဆနျဆေးရညျနဲ့ပါ နောကျတကွိမျ ထပျ နှပျပါ တယျရှငျ
ကိုယျ့အတှကျ ကတော့ တဈ ခှကျ ကို ခေါငျး လြျော ကွိမျရေ ၄ခေါကျစာ ပါ..တ လ ကို ၃ခေါကျလောကျခကျြ ရတယျ
ဆံပငျသား အ လှ အ ပ ကို အ ထူး ဂ ရု စိုကျ ခငျြ တဲ့ မိနျးကလေးတှေ အ တှကျ ကိုယျ လုပျဖွဈတဲ့နညျးလမျးကို ဝမြှေပေး တာ ပါ